တစ်ခုတည်းအမှုဆောင်စားသောက်ဆိုင်များဘယ်မှာလဲ။ | Martech Zone
တနင်္လာနေ့, ဇွန်လ 25, 2007 တနင်္ဂနွေ, စက်တင်ဘာလ 30, 2012 Douglas Karr
တခါတရံမှာငါဒေါ်လာဘီလီယံစိတ်ကူးများရှိသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ (ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့်) ကျွန်ုပ်သည်ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာသောအတွေးအခေါ်များတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ကျွန်ုပ်တွင်ငွေမရှိပါ။ တစ်ယောက်ယောက်ကဒီကိုလာခေါ်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။
ကျွန်တော်အဝလွန်နေပါတယ် ၎င်းသည်အစာစားခြင်းအလေ့အထများနှင့်အထိုင်များသည့်လူနေမှုပုံစံစသည်တို့ဖြစ်သည်။ နှစ် ဦး စလုံးငါ့အမှားဖြစ်ကြသည်။ ငါစားရန်ထွက်သွားသောအခါမည်သည့်နေရာ၌သွားပါစေအရွယ်အစားကြီးသည်ကြီးမားလှသည်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခွဲငယ်တစ်လုံးကိုငါမှာထားရင်တောင်အနည်းဆုံး ၂ ပြားလောက်ရနိုင်ပါတယ်။ စားသောက်ဆိုင်မှာအမေရိကန်ပျမ်းမျှအားဖြင့်အမှုဆောင်နေတယ်ဆိုတာခင်ဗျားသိလား5ကြိမ် ပုံမှန်ဝန်ဆောင်မှုအရွယ်အစား? Ouch!
ငါသိတယ်အစားအစာပန်းကန်တစ်ခုလုံးကိုစားရန်မလိုပါ။ သင် ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ပန်းကန်ပေါ်၌မည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုပမာဏမည်မျှရှိသည်ကိုတွက်ချက်ရန်မဖြစ်နိုင်သလောက်ကို ၀ န်ခံရမည်။ hmmm ။
ဒီတော့ဒီမှာငါ့စိတ်ကူးပါ။ တစ်ယောက်ယောက်က“ Single Servings” လို့ခေါ်တဲ့စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုဖွင့်သင့်တယ်။ သေချာတာပေါ့, ငါတို့ကနံပါတ်ပြားကိုကြီးမားနိုင်ပါတယ်ရှိရာ "Une Assiette" ဖြစ်ကောင်းတစ်ခုချင်းစီအတွက်ရိုးရှင်းစွာအဘယ်မှာရှိနိုင်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့သောစားသောက်ဆိုင်ကွင်းဆက်အောင်မြင်ရသည့်အကြောင်းရင်းအချို့ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။
ဒီထက်အစားအစာ, တူညီတဲ့စျေးနှုန်း! ဒါကတစ်ပေါင်လျှင်ပိုကြီးတဲ့အမြတ်ပဲ။
ငါနေ့လည်စာစားဖို့အဲဒီမှာမသွားဘူးဆိုရင်အလုပ်ခွင်ကဂျပိန်တွေဟာငါ့ကိုဂရုစိုက်တယ်၊ ငါနေ့လည်စာမှာလမ်းလျှောက်ချင်ပါသလားလို့ငါ့ကိုမေးတဲ့အခါ။ 😉
Une Assiette အတွက် tagline ကလွယ်ကူတယ်ဟုတ်လား။ ငါကြိုက်တယ် "Une Assiette နှင့်အတူကြီးမားတဲ့ Assiette ကိုရှောင်ကြဉ်ပါ!"။ တကယ်တော့ဒီအတွေးအခေါ်ကိုယူပြီးသူနှင့်အတူပြေးသူမည်သူမဆိုအတွက်, တစ်သက်တာမုန့်ညက်ဖြတ်သန်းမှုတန်ဖိုးထားတယ်။
ဇွန် 25, 2007 မှာ 8: 54 pm တွင်
ငါတစ်ချိန်ကသူတို့အားတူညီသောလိုင်းများတလျှောက်တွင်တစ် ဦး စိတ်ကူး, အနိမ့်အဆီသာရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီစားသောက်ဆိုင်ကို Jack Sprats လို့ခေါ်တယ်။ တစ်နည်းနည်းနဲ့တော့ဒါကအလုပ်လုပ်လိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူး ကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာကိုအားသွင်းဖို့အတွက်စက်ဘီးပေါ်ပြေးခဲ့ရင်ခြေတစ်ချောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။
ဇွန် 25, 2007 မှာ 9: 20 pm တွင်
မင်္ဂလာပါ၊ အရွယ်အစားအတွက်သင်နှင့်အတူပါ အလုပ်များသော နေ့မှစ၍ အမျိုးသမီးများသည်လယ်ယာလက်များကဲ့သို့အစာစားသည်ကိုစားသောက်ဆိုင်များကဘာကြောင့်ထင်ကြတာလဲမသိဘူး! ငါအစားကောင်းကြိုက်သူများအတွက်ထိတွေ့နှင့်အတူအသေးစားစားသုံးခြင်းကြိုက်တယ်။
အကောင်းဆုံးသတင်းမှာဂေါက်ကွင်းပေါ်ရှိ ၁၈ တွင်းကိုလမ်းလျှောက်ခြင်းဖြင့်လေ့ကျင့်ခန်းရနိုင်သည်။
ဇွန် 25, 2007 မှာ 10: 41 pm တွင်
ဟားဟား .. ငါ post ကို ehm ကြိုက်တယ် .. ကိုယ့်စိတ်ကူးကိုဆိုလိုတာ။
26:2007 pm မှာဇွန် 8, 05
သင်လုံးဝမှန်ပါသည် ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်တော့အားကစားရုံတောင်မလိုပါဘူး။ ကျမရဲ့တင်းပါးကိုကုလားထိုင်ကနေဆွဲထုတ်ပြီးလမ်းလျှောက်ဖို့ကျီးကန်းဘားတစ်ခုပဲ။ ငါအဲဒါကိုလုပ်နေတယ် ဒါဟာငါအကြောင်းပိုမိုရေးသားခြင်း, ငါကလုပ်ဖို့ရပိုမိုလှုံ့ဆော်မှုပုံရသည်။
ဇွန် 25, 2007 မှာ 10: 45 pm တွင်
အချိုပွဲအတွက်သင်သည် ၁၀၀ ကယ်လိုရီရေစာအစုအဝေးများထဲမှ၎င်းတို့ကိုသေးငယ်သောဖလားများတွင်အသုံးပြုရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
26:2007 pm မှာဇွန် 5, 37
ငါ US သို့သွားသည့်အခါတိုင်းတစ်ပတ်အတွင်းကျောက်တုံးတစ်တုံးတင်သည်။ ငါနယူးယော့ခ်တွင် (GBA စတင်သည့်ခေါင်းစဉ်ဖြင့်) ၃ ပတ်ကြာအောင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ သူတို့သည်အခမဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးသောက်သုံးခဲ့ကြပြီးအပြာကြီးတစ်ပုဒ်ကိုအမိန့်ပေးသောအခါရယ်စရာပုံသဏ္gotာန်များရလာသည်နှင့်၎င်းသည်မိသားစုမှ ၅ ယောက်ကိုကျွေးမွေးမည်ဟုကျိန်ဆိုခဲ့သည်။
ငါအစားအစာကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့ညာဘက် Doug ဟာအရွယ်အစားကြီးလွန်းလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြည့်စုံစေတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်တွေဖြစ်စေတယ်။
ဒါပေမယ့်ငါတကယ် Twinkies ကိုလွမ်းခဲ့တယ် ဘုရားသူတို့ဒါစွဲလမ်းဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်သင်၏ပေါင်မုန့်သည်နို့စို့နေသောပေါင်မုန့်မဟုတ်ပါ။ ဒါတွေအားလုံးကဘာလဲ
26:2007 pm မှာဇွန် 8, 09
crusty ပေါင်မုန့်ကိုရှာဖွေရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည်! ငါထင်တယ် Panera ပေါင်မုန့် အနီးဆုံးရိုက်ချက်ကတော့စူပါမားကက်များသာစို့သည်။
ထို Twinkies နှင့်ဝေးဝေးနေပါ။ ငါသူတို့ရှေးဟောင်း Mummification ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုကိုင်ထားစေခြင်းငှါထင်!
26:2007 pm မှာဇွန် 5, 52
ငါလုံးဝသဘောတူတယ် ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်အကြိမ်ပေါင်းများစွာစဉ်းစားခဲ့ဖူးသော်လည်းတစ်ခုတည်းသောဝန်ဆောင်မှု (လုံးဝစိတ်ကူးတစ်ခု) အတွက်လုံးဝအပ်နှံထားသောစားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိရန်မစဉ်းစားခဲ့ပါ။ တဖန်သင်တို့ငါကဲ့သို့တူညီသောစာမျက်နှာပေါ်တွင်ဖြစ်ကြသည်။ စားသောက်ဆိုင်ကအစားအစာအပြည့်နဲ့ငါ့ကိုအတူတူပဲဈေးပေးရင်ငါဂရုမစိုက်ဘူး။ ကျွန်တော့်ကိုအစားအစာနည်းနည်းပေးပါ။
26:2007 pm မှာဇွန် 9, 27
သငျသညျလာမည့်မြေအောက်ရထားပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဖြစ်နိုင်သည်တူသောအသံ, ဒါမှမဟုတ်မ။ အလေးအနက်ထား, ငါ 30 ပေါင်ကျော်မှာအကြေးခွံကိုချွတ်ထားရန်လူသိများကြသည်။ သို့သော်လည်းငါသည်သင်၏စားသောက်ဆိုင်မှာဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်။ အိမ်မှာကိုယ်အလေးချိန်ကျအောင်လုပ်တယ် ငါထွက်သွားတော့အားလုံးကတံခါးအပြင်ကိုထွက်လာတယ်။ တစ်ချိန်ချိန်မှာပျော်စရာရပြီ
ဇွန် 26, 2007 မှာ 12: 53 pm တွင်
ဒီမှာ Indy ရှိပြproblemနာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဟာကွင်းဆက်စားသောက်ဆိုင်များနှင့်စူပါမားကက်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဲဒီညမှာချက်ပြုတ်ဖို့အတွက်ညစာကောင်းကောင်းစားနိုင်မယ့်အစားအစာလတ်ဆတ်တဲ့ 'ထောင့်စတိုးဆိုင်' တစ်ခုကိုငါမစဉ်းစားနိုင်ဘူး။ နှင့် - ချည်နှောင်အားလုံးနှင့်အတူပတ်ပတ်လည်အထူးစားသောက်ဆိုင်နီးပါးရှိပါတယ်။
အနောက်တိုင်းရှိ Vegetarian စားသောက်ဆိုင်များကို miss အလွန် miss လေးစား မိ၍ Mom မေနှင့်ပေါ့ you သော miss စားသောက်ဆိုင်များကိုသင့်တင့်မျှတသောအစားအစာဖြင့်ရနိုင်သည်။ သူတို့ဟာအကုန်အကျမများပါဘူး။
ဒါဟာကျည်ဆံကိုကိုက်ပြီးလှုံ့ဆော်ပေးရမယ့်အရာပဲ။ လုံလောက်သောဆင်ခြေ! ငါကြိုးစားလျှင်ငါလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Nathania Johnson - ဂန္ထဝင်ရုပ်ရှင် Lounge
26:2007 pm မှာဇွန် 9, 50
Atkins ရဲ့အစားအစာကတကယ့်ကိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အချိန်ကတည်းကကာဗွန်သိပ်မများတဲ့စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုအတွက်စိတ်ကူးတစ်ခုရခဲ့တယ်။ ၎င်းတွင်ကြက်သား၊ ငါးနှင့်အမဲသားများပါသောဖလားများကိုတပ်ဆင်ထားသည်၊ သို့သော်ပြင်သစ်ကြော်အစား၊ မုန်လာဥနီတုတ်များရလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် Dieta Cola၊ ဝိုင်၊ အချိုပွဲအတွက်ဆိုရင်တော့သစ်သီးဝလံတွေထဲမှာမုန့်တွေပါ ၀ င်နိုင်တယ်။
ငါသည်လည်းအစားအစာခရုဇ်အဘို့, ယခုပြုသောအမှုလုပ်နေတယ်ထင်ကြောင်းစိတ်ကူးရှိခဲ့ပါတယ်။ သငျသညျအရာအားလုံးအားလုံးပါဝင်နိုင်သည်အဘယ်မှာရှိတစ် ဦး အပျော်စီးသင်္ဘောစီး, သွားပါ။ ၎င်းတွင်ကျန်းမာသောအစားအစာများသာရှိသည်။ သင်အာဟာရဗေဒပညာရှင်များ၊ သင်တန်းဆရာများနှင့်တွေ့ဆုံနိုင်ပြီး၊ အားလပ်ရက်ဟာလူတွေဟာစားစရာတွေပေါ်မှာပျံ့နှံ့နေတဲ့အချိန်ကာလလို့ထင်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့်ဒီဟာကလမ်းပေါ်မှာမရှိဘဲထွက်ပြေးဖို့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်။
ဇွန် 26, 2007 မှာ 6: 43 pm တွင်
ငါမျှမျှတတလျင်မြန်စွာဇီဝြဖစ်ရှိသည်ဖို့ကံကောင်းဖြစ်၏အလေးချိန်ခ / c ချပြီး၏ဘုံရှိစားသောက်ဆိုင်များတွင်ပိုမိုလေးလံသောအဘို့ကိုငါသေချာပေါက်မဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်များသောအားဖြင့်အစားအစာအလွန်အကျွံစားခြင်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်ပျင်းရိ။ အိပ်ချင်စေသည်။ ဤပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန်ကျွန်ုပ်သည်အပိုပြားတစ်ခုဖြစ်သည့်အက်စစ်ဓာတ်ပြားပြားတစ်ချပ်ကိုတောင်း။ အစားအစာ၏တစ်ပိုင်းတစ်ရာကိုဒီပန်းကန်ထဲသို့ရွှေ့။ စားပါ။ ငါဆာလောင်နေတုန်းပဲ၊ ငါ့ရဲ့“ အစေခံ” ပန်းကန်ဆီကနေငါပိုရနိုင်တယ်။ ငါပေးတဲ့စားစရာအဖြစ်ငါပေးတဲ့အစားအစာပန်းကန်ကိုငါသာပြုပြီးမကြာခဏအိမ်မှာအနည်းဆုံးထမင်းတစ်ခွက်လောက်စားဖို့လုံလောက်ပြီဆိုတာငါတွေ့လိုက်ရသည်။
ဇွန် 26, 2007 မှာ 11: 23 pm တွင်
ဒီအလုပ်အတွက်နောက်ထပ်နည်းလမ်းကတော့စားသောက်ဆိုင်ရုပ်မြင်သံကြားတွေကိုတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ရုပ်သံလိုင်းပေါ်တင်ထားဖို့ပါ။ ဒီဟာကငါသွားချင်တဲ့ Tai နေရာမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ သင်စားရန်ကြိုးစားစဉ်ဆတ်အသေကောင်တွင်လင်းတကောက်ခတ်ခြင်းကိုကြည့်ခြင်းထက်အစာစားချင်စိတ်ကိုမပျောက်စေနိုင်ပါ…
ဇွန် 28, 2007 မှာ 2: 23 pm တွင်
ငါတကယ်နောက်ထပ်စိတ်ကူးစိတ်ကူးရှိသည်။ ငါအခြေခံအားဖြင့်အလေးချိန် watchers စားသောက်ဆိုင်အမျိုးသားရေးကွင်းဆက်တစ်ခုရှိသည်။ ငါအဲဒီမှာလုံးဝစားလိမ့်မယ်။ Weight Watcher အကြံပြုထားသည့်အချက်များအရအစားအစာကိုမည်သို့ချက်ပြုတ်ရမည်ကိုသိသောစားသောက်ဆိုင်သို့ကျွန်ုပ်သွားနိုင်လျှင်ဤတိုင်းပြည်သည်တစ်မိနစ်လျှင်ပေါင်ထောင်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
ကျွန်ုပ်သည် Weight Watchers တွင် ၁၀ ပေါင်ခန့်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး၊ အကယ်၍ ၎င်းတို့တွင်ထိုရွေးချယ်စရာရှိပါကကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကလေးများမွေးနေ့ပွဲများကျင်းပမည် (ကျွန်ုပ်တို့၌ရှိပါက) သူတို့သည်ပါတီများအတွင်းစစ်မှန်သောအဆီသို့မဟုတ်အဆီနည်းသောအစားအစာများကိုပျော်မွေ့နိုင်သည်။ Mc Donalds မှသကြားလုံးများနှင့်ကိတ်မုန့်များနှင့်ဖက်တီးဟမ်ဘာဂါများမရှိတော့သောကြောင့်ကလေးသူငယ်များအပိုင်းကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်ပါသည်။